Dainik Samaj | कसरी पदुवा रानी भनेर चिनिने यी महिलाले आफ्नाे पाद बेचेर लाखाैँ कमाउँछिन् (हेराैँ भिडियो) - Dainik Samaj कसरी पदुवा रानी भनेर चिनिने यी महिलाले आफ्नाे पाद बेचेर लाखाैँ कमाउँछिन् (हेराैँ भिडियो) - Dainik Samaj
एजेन्सी । संसारमा मानिसहरु अनाैठाे खालका अनेक कामहरु गरेर पैसा कमाउँदछन् । तर के तपाइ विश्वास गर्नु हुन्छ कोही मानिसले त आफ्नो अपान वायु (गन्हाउने पाद) बेचेर पनि पैसा कमाउन सक्दछ भनेर ? यो त हुनै नसक्ने कुरा हो भन्ने लाग्दछ । तर संसारमा चाहे भने नबिक्ने कुरा के पो रहेछ र ? अमेरिकामा एक महिलले आफूले अपान वायु निस्कासन गरेको भिडियोहरु बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेकी छिन् ।
३१ वर्षकी लुश बोटानिस्ट नामकी ती महिलाले आफूले पादेका भिडियोहरु अनलाइनमा बिक्री गर्दछिन् । अनेक पोज, भावभंगी तथा आवाजमा अपानवायु निस्कासन गरेका भिडियोहरु बेचेरै उनले अहिलेसम्म झण्डै ३० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम कमाइसकेकी छिन् ।
अपान वायु बिक्री गर्ने लुश इन्टरनेटमा फार्ट क्विन अर्थात् पदुवा रानीको नामले चर्चित छिन् ।
अहिले पादेरै लखपति बनेकी लुशलाई सुरुमा चाहीँ यस्तो काम गर्न सहज महसुस हुँदैनथ्यो । एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनले बताए अनुसार एकपटक कसैले उनलाई क्यामराकै अगाडि आवाजसहितको अपानवायु फ्याँक्नका लागि अनुरोध गर्‍यो । साथै त्यस्तो दृश्य आफूले खरिद गर्ने पनि उसले बतायो ।
उनको पेसा आफ्नो पेटको ग्याँस बेच्ने भएपनि उनको शौख भने बगैँचा तथा बागबानीमा छ । उनी आफ्नो घरको बगैँचामा समय बिताउन तथा त्यसको हेरचाह गर्न मन पराउँछिन् ।